Amman: Marika Famoronana Ho Amin’ny Fanovàna Tanatin’ny Hetsi-panoherana Tao Amman · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2011 11:32 GMT
Ireto ny sasany amin'ireo sora-baventy natsangan'ireo mpanao fihetsiketsehana mba hanehoan-dry zareo ny fomba fijeriny:
Diary? Tsy manana diary aho, afatsy ilay anankiray novidiako tany amin'ny magazay mpivarotra boky, Istiqlal (fahaleovantena)!
Ny maha olom-pirenena dia: ny faniriana ny firenenao ho ny firenena tsara indrindra, faniriana ihany koa mba ho ny mponina ao aminao no mponina mendrika indrindra, ary raha toa ka misy zavatra tsy mety hitanao dia tsy hangina sy hijery izany fotsiny.
Tsy amim-pitaovam-piadiana, maniry fanavaozana ara-politika ireo tovovavy tsy mikiraro ireo
Ary tany am-pifaranan'ny hetsi-panoherana tamin'ny fiandohan'ny folakandro, dia namonjy ireto saka kely voapotsitra tao anaty vahoaka ireto i @RaghdaButros ary manam-pikasana ny hanome azy ireo ny anarana Thawra (Fikomiana) sy I3tisam (Fanoherana):
Sakakelin'ny revolisiona. Sary avy amin'i @RaghdaButros.